Rehefa ela ny diany, na rehefa avy miasa mandritra ny tontolo andro, izany dia ilaina mba hitady toerana mba sasao hiala ny dia reraka, hanafaka ny fanerena ny asa, dia afaka ihany koa dia mahatsapa izany mihoatra noho ny taona ny kolontsaina nentim-paharazana. Shaoxing (Sinoa dia eo amin’ny atsimo amoron’ny Hangzhou Helo-drano eo atsinanana faritany Zhejiang. Izany dia tanàna kely ao Shina amin’ny tapitrisa mponina tanteraka. Ity tanàna ity mihitsy ny laharana ao amin’ny firenena amin’ny harin-karena faobe isam-batan’olona. Shaoxing manana be dia be ny fizahan-tany harena, anisan’izany ny ara-drehetra mifandray sy lehibe mozole, ary izany dia an-trano ho an’ny maro malaza, olo-malaza eo amin’ny Shinoa ny tantara, toy Lu Xin, Wang Xizhi sy Zhou Fiara. Vokatr’izany, Shaoxing no iray amin’ireo olo-malaza ara-tantara sy ara-kolontsaina tanàna ao amin’ny firenena. Ankoatra izany, ny voajanahary toerana tsara tarehy koa mahatalanjona, tahaka ny hita any atsimo ny Yangtze Delta. Rehefa be atao fitsidihana noho ny fandraharahana ao Shaoxing, dia ilaina mba hitady toerana mba sasao hiala ny dia reraka, hanafaka ny fanerena ny asa, dia afaka ihany koa dia mahatsapa izany mihoatra noho ny taona ny kolontsaina nentim-paharazana.
Atsinanana Shenli Lalana (Tel — dia hoy fa indray ny tsara indrindra rojo-ponja any Shina. Izany no lasibatra amin’ny saranga antonony. Ny lamaody sy ny avant-garde famolavolana ny foto-kevitra sy asa lehibe mihaja ravaka dia ny malaza endri-javatra. Ny jiro, ny mozika, ary fantasy-tsehatra no tena mandroso eo am-ponja tao Shaoxing. Amin’ny Phebe Fisotroana, dia afaka mandihy miaraka mahafinaritra indrindra ny MOZIKA sy ny mijery ny mahafinaritra indrindra MAMPISEHO. Hiaina ny fitiavana ny alina ao Shaoxing, ara-tantara sy ny tanàna iraisam-pirenena. Ny olona sasany milaza hoe: Mozika dia ny fanahy ny fisotroana. Nisy olona iray niteny hoe: Hatsaran-tarehy dia ny fanahy ny fisotroana. Fa na dia ny mozika na ny hatsaran-tarehy, ny s fotsiny ny lafin-javatra amin’ny famoronana ny rivotra amin’ny trano fisotroana. m noho Izany, ny rivotra, dia ny fanahy ny fisotroana. Satria ny fisotroana dia tsy fanompoana orinasa, fa ny fialam-boly, ny orinasa. Ny fisotroana dia tsy mivarotra ny divay, fa ny rivotra iainana. Raha mbola ianao bar-goer, dia foana fantany izay mihidy tsara rivotra sy izay efa ratsy ny rivotra iainana. Ary Phoebe dia tsy iray amin’ireo mafana indrindra toeram-pandihizana amin’ny Shaoxing amin’ny tsara indrindra ny rivo-piainana. Adiresy: Shaoxing Yuecheng Distrika Di Dang Mpankafy Yi-Dalana (Mifanohitra Shi Mao Zhou Huang manaraka ny EARTH CAFE)Tel Izany tokony ho ny tsara indrindra hifanaraka-ny fisotroana ao amin’io tanàna kely. Ny lehibeny dia tena tsara tarehy. Adiresy: Duding Distrika Farihy Raharaham-barotra Foibe Faritra D, F AZA, (D-F) ny Adiresy: Mei Ela Hu-Dalana, Cai HI Trano Tany Atsimo (akaikin’ny Lapan’ny Buckingham ity) (Tel: — Adiresy: Atsinanana teny zolo-Dalana Misy. F (Tel: — Adiresy: Qian Tao Lalana, World Trade Center, Qinghai InterContinental Fonenana, Tany SOS bar any akaikin’ny Wanda Plaza dia tena atmosfera, spotlights mamirapiratra sy tena lamaody. DJ s feo dia tena mahery sy matanjaka sy lehibe. Bar ity dia tsara tarehy lehibe, toy ny mety handraisana an-jatony ny olona. Toy ny zava-pisotro, izany dia miankina amin’ny ny safidinao.
Tsy lafo vidy ihany
Izany dia ao ny kely alley mifanohitra Shenyang. Izany ihany koa trano fisotroana kafe, raha ny marina. Ny tontolo iainana sy ny asa fanompoana roa lehibe. Ny jiro ao anatiny dia kely pahina, miaraka amin’ny mavo mazava eo amin’ny latabatra ny famoronana aina sy ny toerana manokana. Azonao atao ihany koa ny mihaino ny feon’ny rano mikoriana any ivelan’ny varavarankely. Ny tanora mpandroso sakafo tsara sy malemy fanahy.
Adiresy: Kecia Lake Lalana Tsy Misy
(Volamena Renivohitra Rano Cube) Tel ny tontolo iainana ao amin’ny bar ity no tena tsara. Maro ny vehivavy tsara tarehy sy lehilahy tsara tarehy manana mahafinaritra tao. Ny zava-pisotro dia tsy lafo, somary antonony.
Izaho manokana dia aleoko molotov
ZZOOB dia tokana-atsaharo ny Shinoa vaovao website. Isika dia manome anao ny tena mahaliana sy tena marina Shinoa tantara, sakafo Shinoa, Sinoa miantsena, ny teknolojia Shinoa, Ny shinoa ny fomba fiaina sy ny maro hafa. Ny sary rehetra dia ny zon’ny mpamorona ho tompony ny tsirairay. Rehetra afa-po voalaza dia tsy ampy avy ny tsirairay ny loharanom-baovao. Raha mino ianao dia nampiasa ny zon’ny mpamorona votoaty tsy nahazoana alalana, alefaso mailaka amin’ny email protected ary isika dia hanala izany avy hatrany
← Ny amin'ny chat Roulette - Chatroulette
Shinoa Ny Vehivavy Tokan-Tena Online Tena Sinoa →